ဘယ်နေရာမဆို ဘယ်သူ့ထံမဆို မင်းကို ဖိတ်မန္တကမပြုဘဲ မင်းရောင်သွားခဲ့ရင် တချို့ကမင်းကို ဝင်ခွင့်ပြုကြမှာမဟုတ်။ တချို့က ခွင့်ပြုသော်လည်း သိပ်ဝမ်းသာကြမှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော် . . . မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်လာတဲ့မင်းကို အမြဲထာဝရ ဝမ်းသာကြိုဆိုနေမည့်သူ တစ်ယောက်တာ့ရှိတယ်။ ဘယ်နေရာမဆို ဘယ်သူ့ထံမဆို မင်းဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘဲ အငြိမ့်သား ထိုင်စားနေရင် တချို့က မင်းကို ဆူဆဲမယ်၊ တချို့က မင်းကို နှင်ထုတ်မယ်။ သို့သော် . . . မင်းကို ဆူဆဲခြင်း နှင်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ အမြဲကျွေးမွေးနေမည့်သူ တစ်ယောက်တော့ ရှိတယ်။ ဘယ်နေရာမဆို ဘယ်သူ့ထံမဆို မင်းသူတို့အပေါ် ကျင်ကြီးကျင်ငယ်နဲ့ အန်ဖတ်တွေ စွန့်မိခဲ့ရင် သူတို့ရွံရှာပြီး မင်းကို ပထုတ်ပစ်မှာပဲ သို့သော် . . . […]
ပဋိညာဉ် ခံယူခြင်း (ဝိပဿနာရှင်းလင်းချက်)
ပဋိညှာဉ်ခံယူခြင်း အရှင်ဘုရား တပည့်တော်၏ ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်တရားကို ဘုရားအမြတ်ဆုံးရတနာ တရားအမြတ်ဆုံးရတနာ သံဃာအမြတ်ဆုံးရတနာ ဆရာသခင် ကျေးဇူးရှင်တို့းအား အဇ္ဈတ္တဒါနအဖြစ် သဒ္ဓါပြဌာန်း နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်း၍ လှူ ဒါန်းပါ၏ဘုရား။ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘဆရာ အရိယာသူတော်ကောင်း အပေါင်းတို့အား ကာယကံ ၀စီကံ မနောကံဖြင့် မသင့်မလျော် မတော်အမှု ပြုမိခဲ့များ ပြစ်မှားမိသော် ကော်ရော်အပြစ် မေတ္တာစိတ်ထား ကရုဏာ ပွား၍ သနားကြင်နာ ခွင့်လွတ်ပါဘုရား။ တပည့်တော်အား သူတစ်ပါးက ပြစ်မှားသည်ကိုလဲ စိတ်ထဲနှလုံး ရွှင်ပြုံး ကြည်သာ ခွင့်လွှတ်ပါ၏ဘုရား။ ပစ္စုပ္ပန်ယခု အစပြုကာ တစ်နာရီတိုင်တိုင် တရားထိုင်မည် အဓိဋ္ဌာန်တည်လျက် တည်ကြည်စကား ကတိထားပြီး တရားအလုပ် နောက်မဆုတ်ဘဲ အားထုတ်ရှေ့တိုး အရိုးကြေကြေ အရေခမ်းခမ်း ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပါမည် ဘုရား။ […]
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူဦးရေ သန်းပေါင်းများစွာကို ဒုက္ခပေးတဲ့ရောဂါအထဲမှာ ဆီးချိုလည်းပါပါတယ်။ အာယုဗ္ဗေဒ ဆေးကျမ်းကြီးများက ဆီးချိုရောဂါကို “ရောဂါဥက္ကဋ္ဌ = ရောဂါတို့၏ အကြီးအကဲ” လို့ဆိုတယ်။ ဆီးချိုရောဂါဟာ ရောဂါတံခါးကို ဖွင့်ပေးတဲ့ ရောဂါလို့လဲ ဆိုနိုင်တယ်။ ဆေးသိပ္ပံအဆိုအရ ပန်ကရိယလို့ခေါ်တဲ့ အူမကြီးမှာ လိုအပ်တဲ့ အင်ဆူလင် အရည်တွေ အလုံအလောက် မထုတ်ပေးနိုင်လို့ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ ခေတ်သိပ္ပံဆေးတွေကတော့ ဆီးချိုဝေဒနာသည်ကို အင်ဆူလင်ဆေး ထိုးပေးကြတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးအရရော ခေတ်သိပ္ပံနည်းအရပါ ဆီးချိုဟာ အစားအသောက် မရှောင်လို့ပါ။ အချိုအဆိမ့်တွေ အစားများလို့ ဖြစ်ကြရတာပါ။ ဆီးချိုရဲ့ ရှေ့ပြေးနိမိတ်ကတော့ . . . ဆီးခဏ ခဏ သွားမယ်။ ရင်ပူပြီး ရေငတ်တယ်၊ အာလည်း ခြောက်တယ်။ အိပ်ယာထဲပဲ ဇိမ်နဲ့ နှပ်ချင်မယ်။ […]
ရှေးကျ၍ ခေတ်မီနေသော ရှမ်းအဆိုအမိန့်များ
(၁) မဟောင်တတ်သော ခွေးသည် ကိုက်တတ်၏။ စကားမပြောဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေသူသည် မိုက်တတ်၏။ (၂) မကိုက်တတ်သော ခွေးသည် ဟောင်၏။ ငွေမချေးသင့်ဘဲ ချေးပေးလျင် ဒူးညောင်း၏။ (၃) ကန်ဖူးသော မြင်းသည် ကန်ချက်ကို မမေ့။ လူသည်လည်း အကျင်းပျက်ကို မမေ့။ (၄) ထိုင်သည့်အခါ အောက်ကို ကြည့်ပါ။ ထသည့်အခါ အပေါ်ကို ကြည့်ပါ။ (၅) မပုပ်သော အသီးကို ပိုးမထိုး။ မရှိသောသူကို သူခိုးမခိုး။ (၆) လက်ခြေတို့သည် ၀မ်းဗိုက်၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်သည်။ မည်သူကမျှ အလကားခေါ်မကျွေးနိုင်။ (၇) ခမောက်သည် လူ၏ ဦးခေါင်းနှင့် မကင်း၊ လူတိုင်းသည် အချစ်နှင့် မကင်း။ (၈) နှုတ်ခမ်းရွဲ့သူသည် ဆဲရေးတတ်၏၊ မာနကြီးသူသည် စကားကျဲ၏။ (၉) […]
အမေညွှန့်ဆိုတာ စဝ်ဆုခမ်းရဲ့ မိခင်ပါ။ မိခင်ကြီးရဲ့ (၈၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်မှာ ဒီဆောင်းပါးနဲ့ အမေ့ကိုကျေးဇူးဆပ် အမေ့ပုံရိပ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းပါ။ ဘဝအစ စာရေးသူရဲ့ ရဟန်းမယ်တော်ကြီးဟာ ၁၂၉၀ ပြည့် နတ်တော်လဆန်း (၄) (၁၅၊၁၁၊၁၉၂၈)ရက်နေ့မှာ အဘ ဦးငင်းဆွဲ့ (ခေါ်) ဖအိန္ဒ၊ အမိနိုင်းငင်းဆွဲ့(ခေါ်) နိုင်းဆိုင်ဆာတို့မှ နမ့်ခမ်းမြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ မွေးချင်းတွေကတော့ နန်းရွက်ခမ်း၊ နန်းဟိန်း၊ နန်းကြာ၊ နန်းဆော၊ မောင်ညွှန့်၊ နန်းခမ်းဆိုင်တို့ဖြစ်တယ်။ မွေးချင်း (၅) ယောက်အနက် အထွေးဆုံးဖြစ်သလို အချောဆုံးလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငယ်နာမည် နန်းခမ်းဆိုင် (ခမ်း=ရွှေ၊ ဆိုင်=ကြည်လင်ခြင်း) ဖြစ်ကာ သူတို့ခေတ် သူတို့အခါတုံးက နန်းခမ်းဆိုင်ဟာ ကွမ်းတောင်ကိုင် ပန်းတောင်ကိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနာမည်ကတော့ မညွှန့်တဲ့။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့လည်း ကြုံခဲ့တယ်။ […]
MOTHER အမေဆိုတာ သားသမီးတို့အတွက် . . . M = MANYTHINGS ကျန်းမာပညာ အရာများစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးသူ O = OLD အိုမင်းသည့်တိုင် ခိုင်ခိုင်မာမာ ချစ်ခင်လာသူ T = TEARS များစွာမျက်ရည် ဖြေမဆည်နိုင်အောင် ပေးဆပ်ရသူ H = HEART အနက်ရှိုင်းဆုံး နှလုံးသားမှ ချစ်ခင်ကြင်နာရသူ E = EYES ကရုဏာ အကြင်နာ မျက်လုံးဖြင့်သာ ကြည့်မြင်သူ R = RIGHT အမှန်တရားမှ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်သူ ၁၃၇၃ နတ်တော်လဆန်း (၄) ရက် (29.11.2011) ဟာ အမေညွှန့် (ခေါ်) မယ်တော်ကြီး ဒေါ်ညွှန့် အသက် (၈၃) […]